Faha-26-n’ny “CC CAVB Zone 7”: 12 ny ekipa efa ho avy anio | NewsMada
Faha-26-n’ny “CC CAVB Zone 7”: 12 ny ekipa efa ho avy anio
Roa andro tsy hanombohan’ny fiadiana ny amboaran’ny CAVB (Confédération africaine de volley ball), faritra fahafito, andiany faha-26, efa vonona ny FMVB sy ny mpanohana ary ny avy amin’ny CAVB handray izany eto amintsika. Ekipa 12 avy amin’ny Nosy rahavavy, hatreto, no efa hoavy anio, raha ny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny CAVB sady filohan’ny komitin’ny fanaraha-mason’ity lalao ity, i Jean Michel Dedans. Raha ny nambarany hatrany, 26, hatreto, ny ekipa efa azo antoka fa handray anjara raha toa ka bbola andrasana kosa ny valintenin’ny ekipan’ny Mtsapéré.
Araka ny fandaharam-potoana, ny alahady 16 febroary amin’ny 2 ora sy sasany ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy. Efa hisy lalao mialoha io fotoana io, raha ny nambaran’ny filoha mitantana ny FMVB, ramatoa Ranaivoson Mamy. “Lalao hatramin’ny 88 eo ny hizotra ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina sy eny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny 15 hatramin’ny 22 febroary izao”, hoy hatrany ny fanazavany.
Mpanohana ofisialy ity hetsika ity ny Telma, hanome loka ho an’ireo ekipa tompondaka lahy sy vavy ary ny mpilalao mendrika. Ankoatra izay, handeha mivantana amin’ny fahitalavitra tsy miankina, ny lalao manasa-dalana sy ny famaranana, raha ny nambaran’ny tomponandraikitry ny serasera ao amin’ny FMVB, ramatoa Valérie. Nanome toky ihany koa izy fa hiara-hiasa akaiky amin’ny haino aman-jery rehetra ny federasiona mandritra ity fifaninanana goavana ity. Tsy nanadino nisaotra ny MJS sy ny Komity olympika malagasy ny FMVB manampy ihany koa amin’ny fikarakarana.